Imilinganiselo yeNkqubo yokuLinganisa i-China abavelisi beNkqubo yokuThengisa, abaXhasi
I-JJ-LPK500 ibhalansi yokuhamba kwemali
Iimpawu ezibonakalayo zetekhnoloji yokulungisa inkumbulo
Ukuchaneka okuphezulu kwezithako
I-JJ-LIW Ilahleko-ngaphakathi-yokuThoba uMondli
LIW uthotho ilahleko-e-ubunzima feeder wekhadi yi feeder wekhadi ezikumgangatho ophezulu eyenzelwe kushishino inkqubo. Isetyenziswa ngokubanzi kuqhubekeko lokulawula ukubetheka rhoqo kunye nenkqubo yokulawula ibhetshi yegranular, umgubo, kunye nezinto ezingamanzi kwiindawo zorhwebo ezinje ngerabha kunye neeplastiki, ishishini lamachiza, isinyithi, ukutya, kunye nokutya okuziinkozo. Uluhlu lwe-LIW lokulahleka-kobunzima bokuhamba kwemilinganiselo yokuhambisa imitha yinkqubo yokuchaneka okuphezulu eyilwe yi-mechatronics. Inoluhlu olubanzi lokondla kwaye inokuhlangabezana nezicelo ezahlukeneyo. Yonke le nkqubo ichanekile, inokuthenjwa, kulula ukuyisebenzisa, kulula ukuyidibanisa nokuyigcina, kwaye kulula ukuyisebenzisa. Iimodeli zothotho lwe-LIW zigubungela i-0.5～I-22000L / H.
I-JJ-CKW30 Isantya esiphakamileyo seDynamic Checkweigher
CKW30 ngesantya esiphezulu checkweigher olumanyanisayo-high speed technology processing yenkampani yethu, ehambelana ingxolo-free isantya ulawulo technology, kwaye abanamava technology yolawulo imveliso mechatronics, eyenza ukuba kufanelekile ukuchongwa ngesantya esiphezulu，ukuhlela, kunye nohlalutyo lweenkcukacha manani lwezinto ezinobunzima obuphakathi kwe-100 yeegram kunye neekhilogram ezingama-50, ukuchaneka kokuchongwa kunokufikelela ± 0.5g. Le mveliso isetyenziswa ngokubanzi kwimveliso yeephakeji ezincinci kunye nezixa ezikhulu zeemveliso ezinje ngeekhemikhali zemihla ngemihla, iikhemikhali ezintle, ukutya, kunye neziselo. Kukutshekisha koqoqosho kunye nokusebenza kweendleko eziphezulu kakhulu.
Inkqubo yeJJ-LIW BC500FD-Ex
Inkqubo ye-BC500FD-Ex sisisombululo solawulo lokuhamba okunobunzima esenziwe yinkampani yethu esekwe kwiimpawu zolawulo lobunzima kumashishini. Ukurola yindlela yokutya exhaphake kakhulu kwimizi-mveliso yamachiza, ngokubanzi, into enye okanye ezingaphezulu zongezwa ngokuthe chu kwi-reactor kwisithuba esichaziweyo ngokobunzima kunye nenqanaba elifunwa yinkqubo, ukwenza impendulo kunye nezinye izinto ezilinganiselweyo ukuvelisa ikhompawundi oyifunayo.
Ibanga lokuqhushumba: Exd【ib IIC】IIB T6 Gb
JJ-CKJ100 mqengqeleki ohlukaniswe ukuphakamisa itshekhi yokuhlola
I-CKJ100 yokunyusa i-roller checkweigher ilungele ukupakisha kunye nokujonga ubunzima bayo yonke ibhokisi xa iphantsi kweliso. Xa into ityebile okanye ityebile, inokunyuswa okanye yehle nangaliphi na ixesha. Olu luhlu lweemveliso zamkela uyilo lobunikazi lokwahlula umzimba kunye netafile esongwayo, ephelisa ifuthe kunye nenxalenye yomthwalo kumzimba wesikali xa ibhokisi yonke ilinganisiwe kwaye icinyiwe, kwaye iphucula kakhulu ukungqinelana komlinganiso kunye ukuthembeka komatshini wonke. Iimveliso zoluhlu lweCKJ100 zamkela uyilo lweemodyuli kunye neendlela zokuvelisa eziguqukayo, ezinokuthi zilungelelaniswe neetafile zamandla ombane okanye izixhobo zokwala ngokweemfuno zomsebenzisi (xa zingagadwanga), kwaye zisetyenziswa kakhulu kwi-elektroniki, iindawo ezichanekileyo, iikhemikhali ezintle, iikhemikhali zemihla ngemihla, ukutya, amayeza njl njl umgca wemveliso yokupakisha.
Isikali sokulinganisa sokulinganisa, Ishedi ye-Shear Bead Cell, Ubunzima obuqinisekisiweyo, UkuLungiswa koBunzima beSeti, UkuLungiswa kweMisa, Ubunzima bokulinganiswa kwamaNqanaba amaDigital,